Fikorianan'ny tsipika famokarana ketchup
fisafidianana kojakoja → fanadiovana → fitafiana → fanetezana volo → fikapohana → fifantohana hafanana → fanjonoana → famehezana → fanamafisana → fihinanana → vokatra vita.
Soso-kevitra momba ny tsipika famokarana ketchup:
Safidy fitaovana 1.Raw: misafidy matotra tanteraka, loko mamirapiratra, votoatin'ny maina maina, hoditra manify, nofo matevina, kely ny voan'ny voankazo ho akora.
2. Fanadiovana: sasao amin'ny fidiovana rano madio ny fasika sy ny loto.
3.Trim: esory ny taho sy ny faritra maitso sy lo.
4. Fanosotra mafana: araraka ao anaty rano mangotraka ny voatabia voahidy mandritra ny 2 ~ 3 minitra hanalefaka ny pulp ary hanamora ny fikapohana azy.
5.Pulping: aorian'ny fikororohana dia arotsaho ao anaty polipitra ny voatabia, vaky ny pulp ary esory ny hoditra sy ny masomboly. Avy hatrany aorian'ny fikapohana, ny poleta dia hafanaina ary mifantoka mba hisorohana ny pectinase amin'ny delamination.
6.Centrentration: ataovy ao anaty planeta interlayer, hafanana ary mifantoka ny slurry, ary ajanony ny hafanana rehefa tonga 22% ~ 24% ny soluble solid. Tohizo ny fikolokoloana mandritra ny fizotran'ny fifantohana mba hisorohana ny fandoroana.
7.Packing: aorian'ny fifantohana, ny mari-pana slurry dia 90 ~ 95 ℃, afaka avy hatrany ary asio tombo-kase.
8. Fanamafisana sy fampangatsiahana: fanamafisana amin'ny rano mangotraka amin'ny 1O ℃ mandritra ny 20 ~ 30 minitra, ary avy eo mangatsiaka mandra-pahatongan'ny hafanan'ny tanky 35 ~ 40 ℃.
Fepetra takiana kalitao amin'ny famokarana ketchup: mena ny vatan'ny saosy, mitovy fanamainana, misy viscosity; tsiro masira, tsy misy fofona hafahafa; ny vatan'ny soluble dia nahatratra 22% ~ 24%.
Teo aloha: Emulsifier
Manaraka: Voanjo Cheese